Madaxweynaha Ismaamulka Somalida Itoobiya oo Ceyriyay Madaxweyne ku xigeenkiisii – XAMAR POST
Madaxweynaha Ismaamulka Somalida Itoobiya oo Ceyriyay Madaxweyne ku xigeenkiisii
Madaxweynaha Dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya ayaa xilkii ka qaaday Madaxweyne ku xigeenkiisii C/Kariin Cigaale,waxaana uu ku beddelay Xamdi Aadan Cabdi.
Arrintan waxaa ay la xiriirtaa Dibadbaxyo ka dhan ah Maamulka Cabdi Maxamuud Cumar oo ka socda Gobolka Shiniile oo uu ka soo jeedo Madaxweyne ku xigeenka la eryay.
Wargeyska Adis Standard ee ka soo baxa Caasimadda Itoobiya ayaa sheegaya in go’aanka Cabdi Maxamuud Cumar uu la xiriiro dibadbaxyada ka socda Gobolka Shiniile.
Xamdi Aadan Cabdi waxaa ay sidoo kale tahay Wasiirka Caafimaadka ee dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya,lagamana qaadin xilkaas.
Ilo ku sugan Jigjiga ayaa u xaqiijiyay Adis Standard, in C/Kariin la eryay ee aan lagu beddelin Gabadha,waxaana socda buuq siyaasadeed oo qabiil la xiriira.
Todobaadyadii la soo dhaafay Gobolka Shiniile waxaa ka socday dibadbax dadka Gobolka ay ku diidayeen saraakiil ka soo jeedda Gobollada kale oo xilal ka haya gobolkooda iyada oo kuwii iyaga u dhashay ee Gobollada kale xilalka ka hayayna laga qaaday.
Dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale ka cabanayay Maxaabiis gaareysa 1,500 oo qof oo dhawaan uu maamulka sheegay in la siidaayay warbaahintana u soo bandhigay,taas oo ay ku sheegeen in ay been abuur ahayd hal qof oo ka mid ahna aan la siidaayin.
Waxaa kale oo ay ka cabanayeen Ciidamada loo yaqaan Liyuu Booliska ee uu leeyahay Madaxweynaha Dowlad Degaanka Cabdi Maxamuud Cumar,kuwaas oo dadka degaanka ay ku eedeeyeen in ay wadaan howlgallo ka dhanka h dhallinyarada Gobolka Shiniile.
XOG CUSUB: Dowada Imaaraadka oo Joojisay Shaqadii ka socotay Safaaradeeda Muqdisho